Kutenga yeakanakisa Rollator uye Walkers | Karman® Kufamba Kubatsira
×	 R-4700 - 24 lbs	1 × $109.99
musha / Vanotenderera & Vanofamba / Vanotenderera
View ngoro "R-4700 - 24 lbs" yakawedzerwa kungoro yako.
Chero Chigaro Saizi16 "Chigaro17 "Chigaro18 "Chigaro19 "Chigaro
Kutenga maRollators neVafambi [PANE KUTENGESWA IZVOZVI]
Apa ndipo paunogona kuwana zvakanakisa Vanotenderera, Vanofamba, Vakasarudzika Knee Vanofamba, uye vachienderera mberi Kubatsira Kubatsira naKarman. Isu tinokupa iwe zvigadzirwa zvinokubatsira iwe kuwana rusununguko.
Nekupa misiyano muhukuru hwechigaro, kureba, kureruka muhuremu uye kunyange saizi matai. Unogona kuvimba nenyaya yekuti Karman Rollators ari nyore kushanda uye anogona kutumirwa kusvika pasuo rako chaipo. Tarisa uone zvigadzirwa zvemashizha uye udzidze nezve chimwe nechimwe chakasarudzika chigadzirwa kuti uone kuti ndezvipi zvinokukodzera iwe.
PaKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru, mhando, uye misiyano yamawiricheya aunosarudza kubva. Tine mamwe masarudzo e Manual Wiricheya kuti chero mumwe mugadziri, kusanganisira Kutakura Mawiricheya, Mawiricheya akajairwa, Mawiricheya asingaremi, Ultra Lightweight Wiricheya, Ergonomic Wiricheya uye zvakawanda. Kusarudza chikamu, modhi, ruvara, uye poindi yemutengo zvakakosha kuti mushandisi wekupedzisira anzwisise zvizere edu "mamiriro eunyanzvi" zvigadzirwa zvekufamba. Usakanganwa kutarisa yedu patent S-ERGO S-Rakaumbwa Seating System.
Takazvipira kukutsvagira chigaro chakanakira kushandisa kwako kwehupenyu, mawiricheya edu anonyanyisa mukunyaradza, kufamba uye mitengo. Karman yakatsaurirwa kune zvako zvese zvaunoda, Isu tinopawo Kumira Wiricheya, kutenderedza chigadzirwa chedu mutsetse muMobility Wiricheya chikamu. Tinokutendai nekutishanyira.
Check out kwedu Kumhara Peji Dhairekitori
Ini ndinogona here kuva neiri rollator asi zvakare ndoshandisa iyo kugara pasi sewiricheya?
Ndeipi Karman Rollator yakandinakira?
Mhinduro ndiHERE! Vazhinji vanofambisa uye vanofamba vanoitirwa avo vanokwanisa kufamba. Nekudaro, inogara iri yekuwedzera kana iwe uchigonawo kugara pasi kuti uzorore kana kuchengeta zvimwe zvinhu futi. Tine runyorwa rwezvigadzirwa izvo zvinotendera mabhasikiti kana maviri mune rimwe basa kuitira kuti uchinjike. KuKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru emawichecha emawoko ekusarudza kubva. Kazhinji, kana iwe uchikwanisa kuzvimhanyisa pawiricheya, iwe uchazoda iyo isina kureruka yakanyatsogadzikana wiricheya iripo. Dzidza zvakawanda nezve ese mapoka aripo wobva wasarudza nehuremu hwechigadzirwa uye bhajeti. Heano mamwe mapoka uye ruzivo rwekuongorora kwako: